Fikradaha naqshadda 24 Tabbabeed ee loogu talagalay raga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadda 24 Feather Best Fikradda loogu talagalay Ragga iyo Haweenka
Tattoos waa waxyaabo qurux badan oo ragga iyo dumarkaba ay u socdaan si ay u bedelaan qaybo ka mid ah jirkooda. Markaad leedahay tattoo weyn, dadku way jecel yihiin, wayna qadarinayaan. Waxaad hubaal ka dhigi doontaa tufaaxa arooska markaad aragto.
Macnaha Qodobada Tartanka
Tattoo tufood waxay macnaheedu noqon kartaa fikradda xorriyadda maxaa yeelay waxay la xiriirtaa shimbiraha. Shimbiraha waxaa loo tixgeliyaa xayawaan lacag la'aan ah waana taas sababta ay u duuli karaan hal qayb oo adduunka ah. Hal ama xitaa baalasha kala duwan ayaa ka hadli kara raadinta xorriyadda. Sidoo kale, #cameer ayaa si siman uga hadlaya qaybta dhaqdhaqaaqa, fikradaha, awooda isdhexgalka iyo caqliga. Toogashadu waxay u matali kartaa kuwii geeriyooday, xidhiidhkii lala lahaa dadka dhintay.
Sawirada tufaaxa ayaa ah qaar ka mid ah sawirada ugu fiican ee aad arki karto hareeraha. Waa dhif iyo khaas. Ma aha qof walba oo aad ku aragto shaati-tikaasta. Marka aad raadineyso naqshad # # in aad raadiso xorayntaada, tattoo tani waa mid ka mid ah inuu tago sababtoo ah quruxda iyo muhiimada. Waxay sidoo kale ka dhigan yihiin hadiyado ay ka imanayaan samada. Baalalka sidoo kale waxaa loola jeedaa Xorriyadda, Xaqiiqda, Nacnaanta, Xawaaraha, Kicinta, Duulinta, Sareeya, Riyo, Nabadgelyo, Duco, Ballanqaad, Walaash, Rajo, Isgaadhsiinta dhinaca kale, Socdaalka Nolosha, Socdaalka, Mushkilada, Dhaqdhaqaaqa iyo Miisaanka la'aanta. Tattoos si qurux badan ayaa loogu talagalay inay ku siiso aqoonsiga aad u baahan tahay. Waxaa jira noocyo kala duwan oo shaati ah oo aad u isticmaali karto bedelida habka aad u eegi karto.
1. Fikradda quruxda badan ee tufoodka ah ee gacanta haweenka
2. Naqshadeynta tufaaxa midabka leh ee ku yaala gacanta
Ma jirto qayb ka mid ah jirka oo aanad ku dhejin karin. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan kuu sheegno inaad ogtahay macnaha tattoo aad rabto inaad isticmaasho.
3. Shimbiraha midabada leh iyo sawirka tattoo tufaaxa gacanta
Waxaa jira macnooyin badan markaad isticmaasho tattoo-shaaha. Tattoo tufoodka ayaa la xiriirta xorriyadda. Waxaan ognahay in baadad ka tirsan tahay shimbiraha iyo shimbiraha inay yihiin kuwo bilaash ah.
4. Shimbiraha xayawaanka ah ee loo yaqaan 'tattoo' ayaa fikradda naqshadeynta ku sameeya gacmo furan
Markaad haysato dhowr ama mid tattoo ah ee baaluqa, waxay dhihi kartaa waxaad raadineyso xorriyad.
5. Shimbiraha iyo shimbiraha taatuusha ee gabdhaha dib loo soo celiyo
Dharka shahwada sida tan run ahaantii kama hadal xorriyadda, waxay ka hadli kartaa fikradaha. Tufaaxu waa waxyaallaha hawada iyo markaad la xiriirto, waxay ka dhigan tahay in aad ka fekereyso in aad wax weyn ka heshid ama ka baxsan tahay.
6. Sidee loogu tala galey sawirka tattoo jirka ee gabdhaha
Tattoo sidan oo kale ah ayaa lagu riixi karaa qayb kasta oo jirka ka mid ah. Markaad ku leedahay qaybtan jirkaada, ma joojiso raadinta adadag.
7. Shimbiraha midabka leh iyo sawirka tattoo tufaaxa dhabarka
Waxa ugu horreeya ee aad sameyn kartid waa inaad hesho xirfadle xirfad leh oo kaa caawin doona qaab-dhismeed cajiib ah.
8. Fikradda shimbiraha iyo shimbiraha yar yar ee feerka sawir gacmeedka ah
9. Fikradda taatuusha ee gabdhaha dib loogu celiyo fariin
10. Fikradaha loo yaqaan 'tufts bubble' tufo fikrada naqshadeynta haweenka
Ma jiro kala soocid jinsi ah marka ay timaaddo shaati sida tan. Sida dariiqada ayaa waxay noqotey mid xiran oo ah mid xiran oo ah sababta aan u aragno ragga iyo haweenka diyaar u ah inay ku soo galaan # astaan ​​sida tan.
11. Ku dhaji tufaax taararka tufada oo loogu talagalay gabdhaha
Ma diidi kartid in qaabka tattoo uusan ahayn mid qurux badan. Markaad leedahay tattoo sida quruxsan sida tan, dad badan ayaa mar walba fiirin doona.
12. Fikradda shaatigga ah ee loogu talagalay haweenka canqawga
13. Naqshadda buuxda ee boodhka taatuusha loogu talagalay haweenka
Sababtani waa sababta dad badani ay hadda isticmaalayaan farshaxanada si ay u helaan tattoos cajiib ah sidaan oo kale. Dhammaadka maalinta aad tahay mid ka mid ah in qof kasta ku faraxsan. il image
14. Qurxinta jilicsanaanta suxuunta ee haweenka
Tufaaxyada si sahlan ayaa loogu habeeyey qayb kasta oo ka mid ah jirka bani'aadamka, waxay yihiin kuwo aad u qurux badan oo qurxoon si ay u arkaan. Qaybo ka mid ah jirka oo booguhu waxyeello u geystaan ​​ayaa ku lug leh dhabarka dambe, lugaha ama xitaa cududda. Adiga kama sifeyn kartid sariirta adigoon wax ka ogaanin baalasha. il image
15. Caleemo iyo caleemaha tufaaxa ee gabdhaha
Toogashadu waxay ka yimaadaan shimbiro kala duwan, waxayna macnahoodu yihiin waxyaabo kala duwan dadka. Si kastaba ha ahaatee, baaliga ayaa u taagan xorriyadda. Waxaan aragnaa oo kaliya shimbiraha yar ee lagu haysto maxaabiista halka qaybta weyn ee loo arko in la arkayo roaming ku wareegsan dhulka oo aan xaddidid. il image
16. Fikradda muraayadaha madow ee sawir-qaadaha oo loogu talagalay gacanta gabadhu
Marka dadku ay kugu arkaan baaluq, waxay mar horeba ka warqabaan inaad ka hadlaysid xorriyadda ama raadinta xorriyadda. il image
17. Fikradda quruxda badan ee boodhka ah ee ragga
Isticmaalka shaati-tufoodka ayaa kicin kara waxyaabaha sida birta. Tufaaxu wuxuu muujin karaa caqliga, xoriyada hadalka, calaamadaha iyo waxyaabo kale oo badan oo ay ku jiraan codkarka. Haddii aad soo qaadatay xusuusta waxaad ogaan doontaa in noocyo badan oo ah shaati-tufaad oo dunida ah. il image
18. Dhinaca galmada ee fikrada tattoo jirka ee gabdhaha
Waxaad soo bandhigi kartaa maskaxiyan leh baalasha iyo kuwa ah madax-dhaqameedyada, waxay isticmaali karaan tattoo-kan. il image
19. Mandala iyo jilibka canqawga ah ee loo yaqaan 'tattoo tattoo' loogu talagalay gabdhaha
Waa inaad ogaataa in baalalka gorgorka ahi muujinayaan xoog iyo geesinimo, oo ah raxan-dejiyuhu waa royal iyo qurux iyo shimbiro kale ayaa weli leh macnahoodu. il image
20. Fikirka taatuuga ah ee loogu talagalay gacmaha
Baalasha ma ahan kuwo weyn waxayna ku haboonaan karaan qeyb ka mid ah jirka. Waxaad samayn kartaa wax badan oo ku saabsan agagaarka taraawiyaha. il image
21. Dharbaaxada iyo baaluqka tattoo ragga ragga
Haddii aad jeceshahay waxyaabo kale sida kor u kaca, xayawaanka, ruuxyada ama wax kasta oo aad doonayso inaad ku darsato baaliga, waa suurtagal inaad sameyso. il image
22. Shimbiraha xayawaanka iyo boodhka shimbiraha loogu talagalay dumarka
Waxa ugu horreeya ee aan kugula talineyno waa inaad fadhiisato oo aad cilmi baaris ku samayso shimbiraha iyo baalashooda. Markaad samayso, dooran bareerkaaga oo go'aamin qaybta jidhkaaga ee aad rabto in la marsado. il image
23. Fikradda shimbiraha ee garabka tattoo ee ragga
Markaad ogaato macluumaadkaan, waa inaad raadisaa farshaxan, kuwaas oo abuuri doona boodkaa quruxda badan ee jirkaada. il image
24. Fikradda garabka midig ee tattoo tifo fariin, hal maalin ayaan u duuli doonaa 'gabdhaha
Waxaa jira meelo badan oo aad ka heli kartid fanaan kaasoo kuugu sheegi doona tattoo-gaaga. Wadahadalku aad ayuu muhiim u yahay adiga iyo artistka. Falanqeyn la'aanta waxay ku dhammaan kartaa inay ku siiso fikradda khaldan ee baaliga ah ee aad rabto inaad hesho. il image
25. Midab tufaax ah oo tufaax ah oo loogu talagalay gacanta
Halkan riix halkan si aad u hesho sawirada Tattoo Tattoo
taraagada kubbaddalaabto laabtaku dhaji tattoostattoos ubaxtattoos qoortasawirrada raggahenna tattootattoos qorraxdawaxaa la dhajiyay tattoostattoo ah octopusTilmaamta jaalaha ahTattoo Feathercalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahDhaqdhaqaaqatattoos iskutallaabtashaatiinka shiidanTattoos Wadnahatattoo maroodigatattoos sleevetattoos saaxiib saxa ahtattoo biyo ahsawirada malaa'igtawaxay jecel yihiin tattoostattoossawirada gabdhahaTartoo ubax badangadaal u laabofikradaha tattootattoos qosol lehtattoo dheemanlibto libaaxgaraacista gacmahaarrow Tattootattoos cagtatattoo indhahashimbir shimbirlammaanahamuusikada muusikadatattoos moontattoos gacantaTattoo infinitytattoos eagletattoos taajkiijimicsiga bisadahatattoos qabaa'ilkasawir gacmeednaqshadeynta mehndikoi kalluunkatattoo tilmaanJoomatari Tattoos